နမ်းခံနီးမှခံတွင်းအနံ့ဆိုးကြောင့်ယုံကြည်မှုလျော့နည်းသွားတာမျိုးဖြစ်ဘူးကြလား… – Trend.com.mm
Posted on October 26, 2018 October 26, 2018 by Shun Lei Phyo
ခံတွင်းရနံ့ဆိုတာ လူုတစ်ယောက်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာထဲကတစ်ခုပါပဲ။ နေ့စဉ်နေထိုင်ရာမှာ လူအများကြားပြောဆိုဆက်ဆံရင်းခံတွင်းအနံ့ဆိုးရင်လည်း အဆင်မပြေသလို ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းခံတွင်းရနံ့မကောင်းတာဟာ သွားနဲ့ခံတွင်းကျန်းမာရေးအတွက်ဆိုးဝါးတဲ့ရောဂါတစ်ခုပါပဲ။ သမီးရည်းစားချစ်သူ တွေ၊ ကိုယ့် ချစ်ရသူ တွေနဲ့ ချစ်စဖွယ်နမ်းရှုံ့အကြင်နာပေးတဲ့အခါလည်း ဒီလိုဆိုးဝါးတဲ့အနံ့ကြောင့် ယုံကြည်မှုရှိရှိ ခံစားချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ဆက်ဆံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကိုယ်တိုင်တင်မကပဲ ကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြောဆိုတဲ့သူ၊ အတွက်ပါအနှောက်ယှက်ဖြစ်စေတဲ့ ခံတွင်းရနံ့ဆိုးကို မဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်သင့်သလဲဆိုတဲ့နည်းနာအနည်းငယ်ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်….
သွားတိုက်တာပဲ ဘာဆန်းလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့။ သွားတိုက်တာမဆန်းပင်မဲ့ ပေါ့ပေါ့လျော့လျော့နဲ့အိပ်ခံနီးသွားတိုက်ဖို့ကိုမေ့နေကြတဲ့သူတွေအများကြီးပါပဲ။ သွားကိုတစ်နေ့မှနှစ်ကြိမ်အနည်းဆုံးမတိုက်ရင်တော့သင့်ရဲ့ခံတွင်းမှာနောက်ပိုင်းအနံ့ဆိုးတစ်ခုကပုံမှန်ရှိနေပါလိမ့်မယ်။
ရေနွေးနဲ့စားကိုသုံးပြီး ပလုတ်ကျင်းကျင်းပေးပါ ။ ဒီနည်းကသင့်ရဲ့ ခံတွင်းအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ အောင်းနေတဲ့အနံ့ဆိုးတွေ၊ Bacteria တွေကို ကင်းစင်စေပါတယ်။
(၃) တစ်ပတ်မှာနှစ်ခါ ဆား(သို့) သွားတိုက်ဆေးမှုန့်လိုအရာမျိုးနဲ့တိုက်ပါ
တစ်ပတ်မှာနှစ်ခါ ဆား(သို့) သွားတိုက်ဆေးမှုန့်လိုအရာမျိုးကိုသုံးပြီးတိုက်ပေးခြင်းကသွေးချေးတွေကိုသန့်စင်စေနိုင်ပြီး ခံတွင်းကိုအေးစေကာ အနံ့ဆိုးတွေကိုယူပစ်သလိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။
သွားတိုက်ရာမှာအပေါ်ယံဖြူစင်ဖို့ရယ်မဟုတ်ပဲစနစ်တကျနဲ့သွားအတွင်းဘက်တွေ ထောင့်တွေ အောက်တွေ နေရာစုံအောင်တိုက်ဖို့တော့လိုပါတယ်။
အစားစားပြီးတိုင်း သွားမတိုက်ရင်တောင်ပလုတ်ကျင်းတတ်တဲ့အလေ့ကျင့်လေးကို လုပ်ပါ။
(၆) တစ်စုံတစ်ခုသွားကြားထဲညပ်သွားတဲ့အခါ မျိုးမှာ အချိန်ကြာကြာ ကြီးအောင်းမထားပါနဲ့
တစ်ခါတစ်လေမုန့်တစ်ခုခုစားရင်းနဲ့မတော်တဆသွားကြားညပ်သွားတာမျိုးရှိပါတယ်။ ဒီလိုအခြေနေမှာညပ်နေတဲ့အရာကိုဖယ်မထုတ်ပဲအချိန်တော်တော်ကြာပစ်ထားရင် သွားကြားထဲကအစာကြောင့်အနံ့သက်ဆိုးဝါးစေနိုင်တဲ့အပြင်သွားကျန်းမာရေးကိုလည်းထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ခံတှငျးရနံ့ဆိုတာ လူုတဈယောကျအတှကျအရေးကွီးတဲ့အရာထဲကတဈခုပါပဲ။ နစေ့ဉျနထေိုငျရာမှာ လူအမြားကွားပွောဆိုဆကျဆံရငျးခံတှငျးအနံ့ဆိုးရငျလညျး အဆငျမပွသေလို ကနျြးမာရေးရှုထောငျ့ကကွညျ့မယျဆိုရငျလညျးခံတှငျးရနံ့မကောငျးတာဟာ သှားနဲ့ခံတှငျးကနျြးမာရေးအတှကျဆိုးဝါးတဲ့ရောဂါတဈခုပါပဲ။ သမီးရညျးစားခဈြသူ တှေ၊ ကိုယျ့ ခဈြရသူ တှနေဲ့ ခဈြစဖှယျနမျးရှုံ့အကွငျနာပေးတဲ့အခါလညျး ဒီလိုဆိုးဝါးတဲ့အနံ့ကွောငျ့ ယုံကွညျမှုရှိရှိ ခံစားခကျြကောငျးကောငျးနဲ့ဆကျဆံနိုငျကွမှာမဟုတျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျတိုငျတငျမကပဲ ကိုယျနဲ့ထိတှဆေ့ကျဆံပွောဆိုတဲ့သူ၊ အတှကျပါအနှောကျယှကျဖွဈစတေဲ့ ခံတှငျးရနံ့ဆိုးကို မဖွဈအောငျဘာတှလေုပျသငျ့သလဲဆိုတဲ့နညျးနာအနညျးငယျကိုမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ….
သှားတိုကျတာပဲ ဘာဆနျးလို့မထငျလိုကျပါနဲ့။ သှားတိုကျတာမဆနျးပငျမဲ့ ပေါ့ပေါ့လြော့လြော့နဲ့အိပျခံနီးသှားတိုကျဖို့ကိုမနေ့ကွေတဲ့သူတှအေမြားကွီးပါပဲ။ သှားကိုတဈနမှေ့နှဈကွိမျအနညျးဆုံးမတိုကျရငျတော့သငျ့ရဲ့ခံတှငျးမှာနောကျပိုငျးအနံ့ဆိုးတဈခုကပုံမှနျရှိနပေါလိမျ့မယျ။
ရနှေေးနဲ့စားကိုသုံးပွီး ပလုတျကငျြးကငျြးပေးပါ ။ ဒီနညျးကသငျ့ရဲ့ ခံတှငျးအတှငျးထဲမှာရှိတဲ့ အောငျးနတေဲ့အနံ့ဆိုးတှေ၊ Bacteria တှကေို ကငျးစငျစပေါတယျ။
(၃) တဈပတျမှာနှဈခါ ဆား(သို့) သှားတိုကျဆေးမှုနျ့လိုအရာမြိုးနဲ့တိုကျပါ
တဈပတျမှာနှဈခါ ဆား(သို့) သှားတိုကျဆေးမှုနျ့လိုအရာမြိုးကိုသုံးပွီးတိုကျပေးခွငျးကသှေးခြေးတှကေိုသနျ့စငျစနေိုငျပွီး ခံတှငျးကိုအေးစကော အနံ့ဆိုးတှကေိုယူပဈသလိုဖယျရှားပေးနိုငျပါတယျ။
သှားတိုကျရာမှာအပျေါယံဖွူစငျဖို့ရယျမဟုတျပဲစနဈတကနြဲ့သှားအတှငျးဘကျတှေ ထောငျ့တှေ အောကျတှေ နရောစုံအောငျတိုကျဖို့တော့လိုပါတယျ။
အစားစားပွီးတိုငျး သှားမတိုကျရငျတောငျပလုတျကငျြးတတျတဲ့အလကေ့ငျြ့လေးကို လုပျပါ။
(၆) တဈစုံတဈခုသှားကွားထဲညပျသှားတဲ့အခါ မြိုးမှာ အခြိနျကွာကွာ ကွီးအောငျးမထားပါနဲ့
တဈခါတဈလမေုနျ့တဈခုခုစားရငျးနဲ့မတျောတဆသှားကွားညပျသှားတာမြိုးရှိပါတယျ။ ဒီလိုအခွနေမှောညပျနတေဲ့အရာကိုဖယျမထုတျပဲအခြိနျတျောတျောကွာပဈထားရငျ သှားကွားထဲကအစာကွောငျ့အနံ့သကျဆိုးဝါးစနေိုငျတဲ့အပွငျသှားကနျြးမာရေးကိုလညျးထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။